‘ओलीले कार्य हैन उखान भनेर प्रधानमन्त्रीको रेकर्ड राख्नुभयो’ – भुपेन्द्रजंग शाही [ अन्तर्वार्ता ]::Best News Portal In Nepal, Business News, Political, Social, Science, Economy, Social, Entertainment, Nepali Model, Movies, Actors, Actor, Interview, Audio & Video.
भुपेन्द्रजंग शाही प्रकाशित : बिहिबार, माघ २४, २०७५
काठमाडौँ- वर्तमान सरकार अधिनायकवादी भएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आन्दोलन गर्दै गर्दा नेपाल तरुण दल अग्रपंक्तिमा देखिएको छ ।
तरुण दलले सात वटै प्रदेशका राजधानीहरूमा प्रदर्शन गरेको छ । प्रदर्शनमा राम्रो जनसहभागिता भएको तरुण दलको दाबी छ । सरकारविरुद्ध गरिएको प्रदर्शन र भावी कार्यक्रमका बारेमा तरुण दलका महासचिव भुपेन्द्रजंग शाहीसँग भएको कुराकानीको सम्पादित अंश :
♥ तरुण दलले सात वटै प्रदेशमा किन सरकार विरोधी कार्यक्रम गरेको हो ?
– सरकारको अधिनायकवादी चरित्र छ । सरकारले हरेक दिन गलत निर्णय गरेको छ । एउटा पनि निर्णय जनताको पक्षमा छैन । आफ्नो इच्छा अनुसारको काम र निर्णय भएका छन् । सरकार भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको छ । निर्मला पन्तका बलात्कारी र हत्यारालाई अहिलेसम्म कारबाही भएको छैन । उल्टो संरक्षण गरिरहेको छ । महँगी त्यस्तै छ । मूल्य वृद्धि भएकै छ । संसदमा सरकार एकलौटी ढंगले प्रस्तुत भैरहेको छ । पहिले आफैले सहमति गरेको डा.गोविन्द केसीले उठाएका मागमा सरकार पन्छिएको छ । सरकार जनतासँग भागेर गलत काम गर्न थालेपछि त्यसको विरोधमा आन्दोलन गरिएको हो ।
♥ तरुण दलको कार्यक्रममा मान्छे आएनन् रे ? सरकारका मन्त्रीहरू त्यही भन्छन् ?
– तरुण दलको आन्दोलनमा मान्छे आएको देखेर सरकार डराएको छ । मन्त्रीहरू तर्सिएका छन् । हजारौं युवाहरू तरुण दलको जुलुसमा सहभागी हुनुभएको छ । हामी आफै तरुण दलले अपेक्षा गरेको भन्दा पनि बढी मान्छे आउनु भएकोमा हर्षित छौं । कम्युनिस्ट सरकारविरोधी हाम्रो आन्दोलनलाई सफल बनाइ दिनुभएको छ । सरकारी पक्षले हाम्रो आन्दोलन किन देख्थ्यो र ? दोस्रो जनआन्दोलनमा राजा ज्ञानेन्द्रले आन्दोलनकारीलाई देखेनन् । अहिले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले तरुण युवाहरूलाई सडकमा देखेको छैन । राजा ज्ञानेन्द्रकै अवस्था नओस् भन्ने हामी चाहन्छौँ । उहाँहरूको समयमै चेत खुलोस् । बोल्नेभन्दा पनि काम गरेर जनतालाई खुसी बनाउँदा नै उहाँहरूको हित हुन्छ ।
♥ तरुण दलले अकस्मात सातै प्रदेशमा सरकार विरोधी कार्यक्रम गरेको भन्छन् । कांग्रेससँग सल्लाह नै नगरी कार्यक्रम गर्नुभएको हो ? तालमेल मिलने पनि भन्ने आरोप छ नि ?
– तरुण दलले कांग्रेसकै निर्देशनमा आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको हो । माघ ८ देखि १४ गतेसम्म भएका कार्यक्रमहरूमा सरकारसँग आक्रोशित भएका जनताहरूको सहभागिता रहेको थियो । पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले आन्दोलन खोजी रहेको अवस्था थियो । जनताको आवाज बोल्नका लागि अत्यन्तै जरुरी थियो । यो सरकारले अधिनायकवाद लाद्न खोजेको थियो । त्यस कारण हामीले सात प्रदेश कार्यक्रम गरेका हौं । हाम्रा सात वटा कार्यक्रम भए पनि विराटनगरदेखि धनगढीसम्म पुगेका छौं । हाम्रो अभियान देशव्यापी पुगेको छ । राष्ट्रिय माहोल बनेको छ । सरकारको गतिविधिको देशभरि भण्डाफोर भएको छ ।
♥ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कांग्रेसले एजेण्डा पाएन त्यस कारण सडक र सदनमा आन्दोलन गरेको छ । मलाई काम गर्न कांग्रेसले रोकेको छ भन्नुभएको छ नि ?
– प्रधानमन्त्रीले राम्रो गर्नुभएको छ वा छैन भन्ने कुरा जनताको अगाडि छर्लङग छ । एउटा काम चाहिँ राम्रो गर्नुभएको छ उहाँले । अहिलेसम्मका प्रधानमन्त्रीमा खासै उखान र टुक्का धेरै भनेको सुन्न पाइँदैन थियो । उहाँले धेरै उखान टुक्का भन्नुभएको छ । नयाँ रेकर्ड पनि राख्नुभएको छ । नेपाल पहिला गौतम बुद्धको देश, सगरमाथाको देश भनेर चिनिन्थ्यो । अहिले उखान र टुक्का सबैभन्दा बढी भन्ने प्रधानमन्त्रीको देश भनेर चिनिन्छ । त्यो चाहिँ उहाँले बनाउनु भएको छ । उहाँले एउटा पनि राम्रो काम गर्नुभएको छैन । हरेक ढंगले सरकार, हरेक तह तप्का, हरेक क्षेत्रमा सरकार पूर्णत असफल र नालायक भएको छ । यो सरकारको प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्नेनैतिक अधिकार ओलीलाई छैन ।
♥ कांग्रेस र कांग्रेसका भातृ संगठनहरूको आन्दोलनले केही गर्न सकेन । कांग्रेसको आन्दोलनले सरकारलाई हल्लाउन पनि सकेको छैन । सककारले त कांग्रेसलाई पेलेरै राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदबाट पारित गरायो नि ?
– प्रतिपक्षले गर्ने भनेको के बन्दुक बोक्नु पर्ने हो ? बम पड्काउनु पर्ने हो ? सिंहदरबार कब्जा गर्नुपर्ने, त्यो त हामीले गर्न मिल्दैन नि ! हामीले गर्ने होइन त्यो त माओवादीले गर्ने हो । हामीले त सरकारले गरेको गलत क्रियाकलापको भण्डाफोर गर्ने हो । जनतालाई जानकारी गराउने हो । शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने हो । प्रमुख प्रतिपक्षको काम भनेको गलत कुराका विरुद्ध आवाज उठाएर सरकारलाई सचेत गराउने मात्रै हो । त्यो बाहेक चाहिँ हामीले के नै गर्न सक्छौं र ? हामी आफै सरकारमा छैनौं । दुई तिहाइको सरकारले जे जबरजस्ती गरिरहेको छ त्यसको परिणाम भोग्छ । आजै आन्दोलनबाट सबै कुरा हुने होइन । अहिलेको हाम्रो आन्दोलन त्यति ठूलो होइन विरोध प्रदर्शन मात्रै हो । यो कुरा पनि बुझ्न जरुरी छ । अहिल हाम्रो जीवन मरणको लडाइँ होइन । यो आन्दोलन अन्तिम होइन । अबका दिनमा केही हुँदैन भन्ने होइन । आवश्यक प¥यो भने फेरि पनि आन्दोलन हुन्छन् । सशक्त आन्दोलन हुन्छ । आन्दोलन त भर्खर शुरु हुँदै छ । आन्दोलनको एउटा झिल्को मात्रै हो ।
♥ तरुण दलको आन्दोलनलाई त सरकारले देखेन, सुनेन र कुनै सुनुवाई नै गरेको छैन नि ?
– यो सरकारको विरुद्ध हामी ज्यान छाडेर लागेको अवस्था होइन । अहिलेको आन्दोलन ट्रेलर मात्रै हो । एउटा आन्दोलनका झिल्को मात्रै हो । यसको ज्वाला आउन बाँकी नै छ । ज्वाला आउँदा यो सरकार त जलेर कहाँ पुग्छ पुग्छ । हाम्रो आन्दोलनको उपलब्धि भएको छ । यो सरकार आफ्नो निर्णयबाट फिर्ता हुन बाध्य भएको छ । गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाको अस्पताललाई केन्द्रीय सरकारको मातहत ल्याउने निर्णयमा पुग्यो । ती अस्पतालहरूलाई खारेज प्रक्रियामा लैजान खोजेको थियो । हामीले नै चेतावनी दिएपछि अस्पतालहरूको बारेमा ब्याक भएर सरकारले निर्णय गरेको छ । डा.गोविन्द केसीको आन्दोलनमा हाम्रो समर्थन चाहिँ हो । तर, त्यो हाम्रो आन्दोलन होइन । त्यो गोविन्द केसीको आन्दोलन हो । नागरिकको आन्दोलन हो । डा.गोविन्द केसीको आन्दोलन नेपाली कांग्रेसको आन्दोलन होइन र, थिएन । उहाँले उठाएका मुद्दामा हाम्रो सहमति हो । यही सरकारले डा.केसीका मागहरू पूरा गर्ने सहमति गरेको थियो । सहमतिबाट यो सरकार भागेको छ ।
♥ यति लामो समय सुतेको तरुण दलमा एकाएक कहाँबाट उर्जा आयो ?
♥ तपाईहरूले सात प्रदेशको आन्दोलनका बेला कुन विषयलाई उठाउनु भयो ?
♥ बुटवलको विरोध सभामा तरुण दलका अध्यक्ष जितजंग बस्नेतले निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्यामा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको छोराको संलग्नताबारे भन्नुभएको थियो । तरुण दलले प्रमाण भेटाएको हो ?
♥ सरकार विरोध कार्यक्रम त गर्नुभयो ? अब तरुण दलको भावी कार्यक्रम के हुन सक्छ ?
♥ रचनात्मक काम चाहिँ केही गर्दैन तरुण दलले ?
– यो देशका युवाहरूप्रति तरुण दलमाथि ठूलो दायित्व छ । तरुण दलल फागुन महिनाभित्रै ‘उद्यमशील युवा, सिर्जनशिल युवा’ भनेर दश हजार युवाहरूलाई स्वरोजगारमुलक बनाउने, उद्यमी बनाउने व्यवसायी बनाउने एउटा कार्यक्रमलाई हामीले शुरु गर्दै छौं । निर्मला पन्त लगायत महिला र बालिकाहरूको बलात्कारपछि हत्या भएका छन् । महिला हिंसा भएका छन् । अपराधीसँग प्रतिकार गर्नको लागि नेपाल तरुण दलले ‘महिला रक्षक ट्रेनिङ’ देशभरिका तरुण महिलाहरू देशैभरिका करीव ५ सय महिलाहरूलाई आत्मसुरक्षाको प्रशिक्षण दिने छौं । त्यसपछि हरेक जिल्लामा महिला रक्षाका लागि चेतना अभियान चलाइनेछ । हाम्रो आन्तरिक संगठन पनि चल्नेछ । संगठनको सदस्यता वितरणलाई पनि महाअभियान बनाउनाएर देश व्यापी बनाएर तरुण दललाई लैजाने र विधानलाई पनि संघीयताअनुसारको परिमार्जन गर्नुपर्नेछ । संघीय संरचना, समावेशी र समय परिस्थितिअनुसार पनि विधानलाई परिमार्जन गर्नुपर्नेछ ।
♥ तरुण दलले किन पूर्णता पाएन ? कहिलेसम्म तरुण दल पूर्ण हुन्छ ?